တရုတ် Alexa Voice Control Smart Wifi Touch Switch ထုတ်လုပ်သူ - Zhechi Electric
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတွေ့အကြုံ 12 ခုရှိသော Alexa Voice Control Smart Wifi Touch Switch ၏ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးနှင့် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ကတိပြုပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ISO 9001 စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီး ထုတ်ကုန်အားလုံးသည် Intertek မှ CE နှင့် CB Certificate ဖြင့် အရည်အသွေးပြည့်မီပါသည်။ MOQ သည် 1 pc ဖြစ်သည်၊ သင်သည်မည်သည့်ပမာဏကိုမဆို WIFI စမတ်ခလုတ်ကိုယူနိုင်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် နောက်ဆုံးရောင်းချနေသည့် Alexa Voice Control Smart Wifi Touch Switch Quotation
1. Alexa Voice Control Smart Wifi Touch Switch ၏ ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
2. Alexa Voice Control Smart Wifi Touch Switch အတွက် အင်္ဂါရပ်များ
1.WiFi တံခါးပေါက်ဖြင့် အင်တာနက်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်မှု
2. Toughened Glass Surface သည် ဓားများ သို့မဟုတ် မာကျောသော အရာတစ်ခုမှ ခြစ်ရာများကို တားဆီးပေးသည်။
4.Fire Retardant ဓာတ်အားလိုင်းများ ဝါယာရှော့ဖြစ်ခြင်းအတွက် ကာကွယ်မှုကို အားကောင်းစေခြင်း။
5. Smartlife အက်ပ်တွင် 3G/4G/WiFi မှတစ်ဆင့် အဝေးထိန်းစနစ်
6. Amazon Alexa/Google Home/ IFTTT ဖြင့် အလုပ်လုပ်ပါသည်။
8. App တွင် အချိန်နှင့်တပြေးညီ အခြေအနေကို ပြသသည်။
9. လုပ်ဆောင်ချက်ကို မိသားစုဝင်များနှင့် မျှဝေပါ။
11.LED Noctilucent Navigation
Alexa Voice Control Smart Wifi Touch Switch ၏ နည်းပညာဆိုင်ရာ ဘောင်-
ကြိုးသွယ်ခြင်း။ Live & Neutral Wire၊ Capacitance မလိုအပ်ပါ။
မက်။ လက်ရှိ 20A
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဘဝ အကြိမ် 100,000
ကြိုးမဲ့အမျိုးအစား 2.4GHz WiFi
အရောင် အနက်ရောင် ရွှေရောင် သို့မဟုတ် စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသည်။
ပစ္စည်း Tempered Crystal Glass + 94V-0 ABS/PC
Alexa Voice Control Smart Wifi Touch Switch ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ
[APP အဝေးထိန်းခလုတ်] - Tuya သို့မဟုတ် smart life APP ကို ​​အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်ကို အဝေးမှ ထိန်းချုပ်ရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်ဝေးနေချိန်တွင် APP မှ ရေအပူပေးစက်၏ အဖွင့် သို့မဟုတ် အပိတ်အခြေအနေကို သင်မြင်နိုင်သည်။
[အချိန်ကိုက်ခြင်း] - စမတ်ခလုတ်ကို timer လုပ်ဆောင်ချက်မှတစ်ဆင့် သတ်မှတ်အချိန်တစ်ခုတွင် အလိုအလျောက်ဖွင့်/ပိတ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသောအချိန်၌ အဖွင့်/ပိတ်ရန် စီစဉ်ထားသော/နှစ်သစ်အချိန်တိုင်းကို သတ်မှတ်နိုင်သည်။
[Support Voice Speaker Control] - ခလုတ်သည် Alexa နှင့် Google Home Assistant တို့နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အဖွင့်/အပိတ်လုပ်ရန် အသံထိန်းချုပ်သည့် စမတ်ခလုတ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ [မျှဝေရန်] - ထိန်းချုပ်ခလုတ်ကို မိသားစုဝင်များနှင့် မျှဝေနိုင်ပါသည်။
[အခြား Smart Devices များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း] - ၎င်းကို အတူတကွ အဆင်ပြေသော စမတ်ဘဝတစ်ခုကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် အခြားစမတ်စက်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါသည်။ အိမ်ပြန်ရောက်သည်နှင့် ကန့်လန့်ကာများကို အလိုအလျောက်ဖွင့်ရန် အိမ်မုဒ်ကို ဖန်တီးပြီး အခြားစမတ်စက်ပစ္စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်နိုင်သည်။
hot Tags:: Alexa Voice Control Smart Wifi Touch Switch၊ တရုတ်၊ စျေးသက်သာ၊ လျှော့စျေး၊ နောက်ဆုံးရောင်းနေ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စတော့တွင်၊ အခမဲ့နမူနာ၊ စျေးနှုန်း၊ ကိုးကားချက်၊ အာမခံ ၂ နှစ်